yulia | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Yulia Egudin
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Uhambo lwesitimela olude kunazo zonke emhlabeni lude kakhulu! Lezi kulolu hambo kungathatha izinsuku eziningana bayigubungele izinkulungwane zamakhilomitha. Ngakho, nazi uhambo thatha omude kunayo yonke eYurophu, I-Asia, Australia, US. Le ndatshana yabhalelwa ukufundisa…
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi Bernina Express ingenye amahle kakhulu isitimela ohambweni emhlabeni. Okokuqala nje, Emgqeni weRauma osuka eDombas uye e-Andalsnes (Norway), ungakwazi ukujabulela imibono iphakama okusezingeni eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, ungabona imithambeka yezintaba namathafa njengoba udlula iRauma…